Goormee ayey suuragal tahay Mideynta Qoysaska?
Yaa imaan karo?
Waa maxay waxyaa laha kale ee loo baahanaan karo?
Sidee loo xareeyaa dacwada Mideynta Qoysaska?
Dukumiintiyadee ayaa loo Baahanyahay marka Dacwo la xareyna yo.
Waa sidee Hab uu socodka dacwada?
Side ayey looga uu shaqeeyaasa DNA du?
Mudo intee la eg ayay qaadaneysaa boroseeskaan? Qarash intee la eg ayaa ku baxaayo?
Maxaa dhacaayo hadii Kiiska Diidmo la siiyo?
Maxaa Xigo kadib Marka Austria loo soo Safro?